Derjada-ruuxi qiimaynta aragti of Tokyo
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Derjada-ruuxi qiimaynta aragti of Tokyo
Tan waxaa salon, iwm in ay noqon kartaa iyo qiimaynta aragti ruuxiga badan oo psychics ee Tokyo, ku bari doonaa qaadayo qaar ka mid ah. appraisers iyo adeegyada soo bandhigay halkan
maal-sheegida iyo salon ruuxiga ah ee Ginza, Tokyo. Ma aha oo kaliya in qiimaynta aragtida ruuxiga ah, waa salon haysta appraiser in ay isku dubaridi noocyo kala duwan oo scry. About 15 qof ku saabsan appraiser ah, oo ay ku jiraan qiimaynta aragtida ruuxiga ah waxaa suurto gal derjada ayaa ku qoran.
ee la soo dhaafay, ama waxaa lagu daabacay wargayska "Anan", sida qiimaynta Atsushi Tamura talanti, adeegno magaca aqoonsiga ayaa sidoo kale kasoo muuqday warbaahinta.
heli kartaa qiimayn ah si deggan qol gebi gaarka loo leeyahay, waa mid aad u caan ah oo leh dumar dukaameystaan ??in moodada, qancinta macaamiisha waa in ka mid ah in ka badan 95%.
Tan iyo lacag qiimaynta waa 30-daqiiqo 5000 yen ah, waxaa dhihi lahaa in ku filan waa heerka faa'iido siiyey goobta in Ginza ah.
sababta oo ah meel wanaagsan oo Ginza, helitaanka waa wanaagsan yahay, oo aad ku socotaan karaa shanta saldhigyada soo socda.
? saldhigga suuqa Toei Oedo Line Tsukiji
Akira Shoan waa salon maal-sheegistii dukaan dhigay ilaa dabaqa koowaad Shinjuku Hilton Tokyo dhulka hoostiisa. Sababtoo ah waa qol gaar ah hoostiisa, waxa aad heli kartaa si tartiib tartiib ah qiimaynta ah in meel xasilloon halkaas Uma maleynayo bartamaha magaalada. In wakhtiga qoraal our, appraisers in uu noqon karaa qiimaynta aragti ruuxiga ah 4 qof, appraisers in loo isticmaali karaa derjada waa hal qof. Tan iyo salon raaxo
, fool-ka-fool qiimaynta waa in yar oo aad kor loogu qaado iyo 3000 yen 15 daqiiqo. qiimaynta Samantha waa qaali iyo 30000 yen saacadiiba. Sababtoo ah waa in ka mid ah dadka caanka ah iyo siyaasiyiinta iyo dadka inta badan daahsoon tagaan, haddii ay macquul tahay in ay buuxiyaan appraisers iyo maal-lagala baxo in ay jirto awood dhigma, waxa uu, ma noqon marna aad u sareeya doonaa. Anigu garan maayo oo ha isku dayin in ay tagaan haddii la kulmi appraiser wanaagsan.
? Jr, tareen gaar ah, dhulka hoostiisa "Shinjuku Station"
? hoostiisa "Nishi"
? Oedo Line "Metropolitan Dowladda Station"
waa masaafad ka idaacadda.
◆ waa Kazumi Mr.
Kazumi Yamazaki Yamazaki laakiin waa derjada yahay iibinta museum aragti ruuxiga ah ee xafiiska in Kurashiki, Okayama Prefecture, sidoo kale waxay leedahay Tokyo safar ganacsi.
Ms. Kazumi Yamazaki waqtiga carruurta Hokkaido tegey dhacdada, laakiin wuxuu u noqday mawduuc oo uu saadaaliyay halka carruurta by view Ruuxa. Waxa kale oo ay ku sii jiri doontaa, sida waqtiga Tweet ah, fadlan isku day inaad hesho kuwa ku mashquulsan yihiin tan waxaa la ciyaaray goobo badan news.
Waxa intaa dheer in Hokkaido tegey dhacdada, haddii ay dhacdo soo socda, waxaan ku qoray in E arkay in view ruuxiga on blogs iyo Twitter.
? Okayama Prefecture Kurashiki by afduubka dhacay
? Meguro naag Japanese dil ka dhacay arrin furfurantay
? Kanada ee Vancouver ka dhacay Himonya park
? Aomori gabar dugsiga sare dhacdo maqan
? Chiba gabdhaha dil dhacdo baxsi Maydka
2017 ee November, Tokyo safar ganacsi jaale Oo waxaa lagu aasay ilaa May 2018, waxa ay noqotay xaalad ah kala bar sugitaanka sano ah. goobta
waa masaafad ka station soo socda in Akasaka Residential.